Puntland Voice – Page 1035 – Codka Dalka iyo Dadka
Wasiirka arimaha Dibada Dowlada KMG oo shirka Swden ka sheegay in wax laga xumaado ay tahay in Dowlada Talyaanigu tiraa Soomaalida ha la isaga dhex baxo
Wasiirka arimaha Dibada Dowlada KMG Soomaaliya Cali Axmed Jaamac Jingeli oo hadalo ka jeediyay shirka ka socda Dalka Seweden ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in Dowlada Talyaanigu xiligaan ku dhawaaqdo hadal u eg Soomaalida ha la isaga […]
Tartanka Doorashada Gudoomiye xigeenka 1aad oo ay isku soo hareen Labo Xildhibaan kaliya
Waxaa wali si toos ah u socota galabta tartankii doorashada Xilka Gudoomiye xigeenka 1aad ee Baarlamaanka Soomaaliyeed kaasoo ay u tartamayeen Xildhibaano gaaraya 10 mudane. Markii labo wareeg la tartamay ayaa waxaa wareegii 3aad isukugu soo baxay Xildhibaano gaaraya 4 […]
Dagaal khasaare nafeed gaystay oo Maanta Muqdisho ku dhexmaray Ciidamo Xafadeed iyo kuwa AMISOM
Wararka laga helayo Degmada Waaberi ayaa sheegaya in halkaasi maanta uu ka dhacay dagaal qaraar kaasoo dhexmaray ciidamada AMISOM iyo ciidamo madani ah oo ay leeyihiin dadka ku dhaqan Degmada Waaberi ee Magaalada Muqdisho. Ciidamadaaani oo ka jira meesha ay […]
Axmed Walad Cabdala oo soo jeediyay in magaca Dowlada KMG Soomaaliya la badalo
Wakiilka Qaramada Midoobey ee arimaha Soomaaliya Axmed Walad Cabdala ayaa soo jeediyay in gabi ahaanba magaca Dowlada KMG Soomaaliy la badalo mar uu ka hadlayay shir ka dhacay Dalka Sweden oo arimaha Soomaaliya looga hadlayay . Axmed Walad Cabdala waxaa […]
Prof.Dalxa oo ku jira Saacadihii ugu danbeeyay ee uu hayo Xilka Gudoomiye xigeenka 1aad ee Baarlamaanka.
Muqdisho (AB):-Xildhibaanada Dowlada KMG Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay Maanta kulan ku yeeshaan Xaruntii Golaha Sacaba halkaasoo lagu wado inay maanta ku doortaan Gudoomiye xigeenada Barlamaanka. Xilalka la dooranayo waxa ka mid ah ku xigeenka 1aad oo wali uu ku […]
Xuseen Nuur Xaaji Aadam (Nasiib) Dr: Axmed Yuunis Sh. Ibraahim C/wali Xasan Xuseen (Fadiilatuhu) Ibraahim Ilyaas Sh. Ibraahim Maama Shamsa Looyaan Ugaas Maama Xaliima Xasan Jimcale Eedo Canab Macallin Xuseen Axmed C/kariim Maxamed (Binkeynaan) C/caziiz Cusmaan Colow (ziizi) Cali Maxamed […]
Maamulka Gobolka Sh.hoose oo fuliyay Xukuno Tacsiir ah
Marka (AB):-Magaalada Marka ee Xarunta Gobolka sh.Hosoe ayaa shalay galab waxaa meel fagaare ah lagu fuliyay xukun tacsiir ah kaasoo lagu qaaday 2 nin oo dhalinyaro ah kuwaasoo lagu soo eedeeyay inay Taleefoonka gacanta ka fiirsanayeen waxyaabaha anshax xumida ah. […]
Madaxweyne Faroole oo Ku Soojeeda Puntland
Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr.Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ayaa ku soo jeeda Caasimadda Puntland ee Groowe ayadoo uu hadda Madaxweynuhu kusugan yahay Dalka Isutagga Imaaraadka carabta isla markaasna la filayo inuu saacadaha soo socda caga dhigto Garoonka Diyaaradaha ee Kanooko. Madaxweyne Faroole […]
Kooxaha Burcad badeeda oo dilay kabtankii Markab shalay ay qabsadeen iyo Ciidamada Puntland oo gacanta ku soo dhigay burcadaasi
Boosaaso (AB):-Wararka laga helayo Madaxda Dowlad goboleedka Puntland ayaa sheegaya in gacanta lagu soo dhigay Markabkii shalay la afuubtay xili uu ku soo jeeday dekada Boosaaso. Ciidamada Badda Puntland ayaa weerar ay ku qaadeen burcad badeeda kadib waxaa u suuragashay […]
« Previous 1 … 1,033 1,034 1,035 1,036 1,037 … 1,044 Next »